पर्दामा राम्रा देखिने सुन्दरीहरुको गोप्य कुरा ?? ~ The Nepal Romania
4:27 AM चलचित्र समाचार, बिबिध No comments
पर्दामा चिटिक्क देखिने कलाकारहरुको गेटअप देखेर सर्वसाधारणले समेत नक्कल गर्छन् । कपाल त्यही शैलीमा मिलाउँछन्, हिंडाइको चाल पनि आफ्नो मनपर्ने कलाकारकै जस्तो बनाउँछन् । अझ फलानो नायकनायिकाजस्तो देखिएँ ? भन्दै दंग पनि पर्छन् । फ्यानलाई यसरी प्रभावमा पार्न उनीहरुले कतिसम्म गर्नुपर्छ तपाइँले कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? चाँडै विवाह बन्धनमा बाँधिने बताइरहेकी नायिका सुमिना घिमिरेले विगत तीन वर्षदेखि दई छाकै भात खाएकी छैनन् रे । आफ्नो सुन्दरता जोगाउनै उनले यस्तो गरेकी हुन् । 'देख्दैमा छ्या यस्ती पनि नायिका ? भनेर कसैले प्याच्च भन्यो भने त बोर नै हुन्छ नि,' उनले भनिन्, 'फेरि मोटी भयो भने त फिल्ममा कसले खेलाउँछ र ।' मोटाउने पीरले नै उनले आलु समेत मुखमा हालेकी छैनन् रे । फलफूल, जुस, रोटी, उसिनेको तरकारी उनको नियमित खान्की हो । मासु त उनी उच्चारण गर्दा समेत मोटाइन्छ भनेर परे भाग्छिन् । अर्की अभिनेत्री नीता ढुंगाना शरिरको फिगर मेन्टेन गर्न नियमित जिम धाउँछिन् । तर उनी जीउ घटाउन होइन बढाउन जिम गईरहेकी छिन्, सात महिनादेखि । नीताले सुन्दर रहन गरेको प्रयास भने आफैंमा विवादस्पद जस्तो लाग्छ । एकातिर उनी मोटाउन जिम जान्छिन् भने अर्कोतिर एक छाक मात्रै भात खान्छिन् । बेलुका सुख्खा खान्की मन पराउने उनले बताइन् । पेट नबढोस् भनेर एक छाक मात्रै खाएको उनको तर्क छ । हिप बढाउन भने नीता नियमति विहान उठबस गर्छिन् । चार दशक उमेर पार गरेर समेत अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरको रुप देखेर जोकोही भुतुक्क हुन्छन् । विहान नियमित दुई घण्टा योगा गर्ने उनको शैलीलाई पछ्याएकी छिन्, नायिका गरिमा पन्तले । करिष्माको रुपमा योगाले नै निख्खरता थपेको हुनसक्ने ठहर छ, गरिमाको । 'उहाँको सुन्दरताबाट म प्रभावित छु । तर त्यस्तै देखिन मैले योगा गरेको भने होइन । प|mेस हुन्छ त्यसैले गरेकी हुँ ।' नायिका रेखा थपा आफू मोटाएको थाहा पाउनसाथै विहानविहान दौडिन थालेकी छिन् । पत्तै नपाई मोटाएको बताउने उनले एउटा फिल्ममा फुटबल खेलाडी बन्नुपर्ने हुँदा कुद्ने अभ्यास
गर्दा मोटाएको थाहा पाइन् । 'ऐना हेरेको त गाला समेत पुक्पुक्क लागेछन्,' रेखाले भनिन्, 'तौल पनि बढेछ ।' सुन्दर देखिन भन्दा पनि स्वस्थ रहनका लागि आफू नियमित व्याम गर्ने रेखाको भनाई छ । अर्की सुन्दरी केकी अधिकारी पनि स्वस्थ रहन नियमति हल्का व्याम गर्छिन् । शरिर स्वस्थ रह्यो भने मात्रै सबै कुरा परिपक्व किसिमले गर्न सकिने हुँदा आफू शरिरको हेरचाहमा विशेष ध्यान दिने उनी बताउँछिन् । गर्मीमा पानी बढी खाने गर्छिन्, केकी । ग्ल्यामरस सिनबाटै डेब्यु नायिका बिनिता बराल नियमित एक घण्टा योगा गर्ने सुनाउँछिन् । अझै पनि निर्देशकहरुले सुन्दर अनुहार र बान्की परेको शारीरिक फिगर हेरेरै नायिका छनौट गर्छन् । जसले गर्दा कलाकारहरु आफ्नै कला निखार्न भन्दा पनि सुन्दरता निफन्न बढी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता छ । नभए कसले पत्याउने ? सुन्दरतासँगै कला पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन्, निर्देशक आकाश अधिकारी । अर्का निर्देशक नरेश पौडेल त कलाकारको शारीरिक पक्ष दोस्रोमा राखेर कलाको जाँच पहले गर्नुपर्ने बताउँछन् । जे होस् कथाले मागेपछि सुन्दरता नबचाएर करियर बच्दैन ? कि कसो सुन्दरी महोदयहरु ?